Aabe ilmahiisa Swedish yihiin oo loo diiday in loo keeno - iftineducation.com
iftineducation.com – Aabe Soomaaliyeed oo ilmihiisa xaq u leeyahiin dhalashada Swedenmaadaama uu asaga Swedish basaboor leeyahay ayaa dhibaato ka haysataa sidii uu ilmihiisa ku keensan lahaa. Aabahaan oo lagu magacaabo Mohamud Madara oo wareysi siiyay wargeyska Dalarnas Tidningar oo ka soo baxa magaalada BORLÄNGE ayaa sheegay in Laamaha Dowlada Sweden ay midba warbixin gooni ah u sheegayaan. Waloow aabahaan ay haysato dhibaatada haysata Soomaalida Sweden ku nool ee ah in ay cadeeyaan aqoonsigooda ayuu hadana uga duwan yahay dadka kale maadaama ay ilmihiisa Swedish yihiin ilaa markay dhasheen sida uu dhigayo sharciga Sweden. Aabahaan oo Sweden soo galay sagaashameeyadii ayaa qaatay dhalasha Sweden sanadkii 2000 asagoo 7 sano ka soo guursaday Soomaaliya halkaas oo 3 ilmood ugu dhasheen. Waloow ilmihiisa aysan waligood Sweden imaan hadana sida uu dhigayo sharciga Laanta Socdaalka maadama aabaha uu dhalashada leeyahay oo ilmaha ay ku dhasheen guur waxay si toos ah u qaadanayaan dhalashada Sweden. Aabahaan ilmihiisa ayaa hada ku xayiran Addis Ababa ayadoo laga diiday cadeymaha uu soo bandhigay maadama Sweden aysan aqbalin waraaqaha laga keeno Soomaaliya. Ilmaha ayaa lagu adkeeyay sidii ay ku qaadan lahaayeen baasaboorka Sweden si ay u soo safraan, dhinaca kale ilmaha ayaan u diiwaan gashaneyn Waaxda canshuuraha Skatteverket in ay yihiin Swedish. Maadaama aqoonsiga Soomaaliya aan la aqbali karin ayaysan macquul ahayn in ilmaha laga diiwaan galiyo Skatteverket balse rajo ayaa jirta maadaama loo sheegay in la qaadi karo DNA. Maadaama ilmaha aysan ka diiwaan gashaneyn Skatteverket oo aysan lahayn Personnummer macquul ma ahan in ay qaataan baasaboorka Sweden. Sida caadiga ah dadka haysta dhalashada Sweden ee ilmaha ugu dhashaan dibada ayaa u soo safra Sweden iyaga iyo ilmahooda ka dibna dalbada baasaboorka balse ilmahaan ma soo safri karaan maadaama baasaboorka Soomaaliga aan la aqbalin. Maxamud ayaa u muuqda in uu ku dhexdhacay shuruuda lagu soo rogay Soomaalida sanadkii la soo dhaafay waloow xaalkiisa uu ka duwan yahay dadka kale.
Aabe Soomaaliyeed oo ilmihiisa xaq u leeyahiin dhalashada Swedenmaadaama uu asaga Swedish basaboor leeyahay ayaa dhibaato ka haysataa sidii uu ilmihiisa ku keensan lahaa. Aabahaan oo lagu magacaabo Mohamud Madara oo wareysi siiyay wargeyska Dalarnas Tidningar oo ka soo baxa magaalada BORLÄNGE ayaa sheegay in Laamaha Dowlada Sweden ay midba warbixin gooni ah u sheegayaan.